I-5 SaaS Ukuphumelela KweKhasimende Imikhuba Emihle | Martech Zone
I-5 SaaS Ukuphumelela Kwamakhasimende Imikhuba Emihle
NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, i-2020 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, i-2020 Hardik Oza
Sezadlula izinsuku lapho amaqembu okuphumelela kwamakhasimende asebenza kanzima ngezingcingo ezingenamkhawulo namakhasimende ukuphatha. Ngoba manje yisikhathi sokukhipha kancane futhi uthole okuningi ngokuya ngempumelelo yamakhasimende. Konke okudingayo amasu athile ahlakaniphile, futhi mhlawumbe olunye usizo oluvela kufayela le- Ukuthuthukiswa kwesicelo se-SaaS inkampani.
Kepha, nangaphambi kwalokho, konke kwehlela ekwazini izindlela ezifanele zokuphumelela kwamakhasimende. Kepha okokuqala, uqinisekile ukuthi uyazi ngaleli gama. Asibone.
Yini igebe lempumelelo, futhi kungani libalulekile?
Ngamazwi alula, lapho okufunwa yikhasimende kungafani nalokho okunikezwa ngumkhiqizo wakho, kukhona igebe lempumelelo. Futhi leli gebe lilele kuleyo ndawo encane yokuxhumana, amabhizinisi amaningi ahluleka ukugcwalisa. Lesi sikhala sibalulekile ngoba sizokuthikameza ukusimazeka kwakho kwezentengiso, ukugcinwa, ukuthengiswa okuthengiswayo, ukuthengiswa phezulu, nokunye okuningi.
Nayi imikhuba emihlanu ephezulu okufanele ungene kuyo ukuze ufike esicongweni sohlelo lomdlalo wempumelelo yamakhasimende. Bheka!
Umkhuba Ohamba phambili #1: Veza Ukubonga, Landa Okuphikisayo, Yakha Ubudlelwano
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokufeza impumelelo yamakhasimende akumele uyeke ukukhombisa ukubonga kwakho. Futhi ngalokhu, 'ngiyabonga' imantra efanele ukuhaywa.
Inhliziyo yalo mkhuba ilele ekutheni ikhasimende lakho likukhethe kuyo yonke imincintiswano yakho. Ngakho-ke ukubonga kumane kuyisiqinisekiso seklayenti sokuthi bebefuna okungcono kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ungafaka lokhu ezigabeni eziningana zamasevisi nezinqubo zakho. Isibonelo, lapho iklayenti lingena kuqala, livulela isivivinyo samahhala, livuselele izinhlelo, noma lishiye impendulo.
Njengoba sishilo impendulo, lelo elinye ibhokisi elibalulekile okufanele ulihlole. Khuthaza amaklayenti akho ukuthi anikeze impendulo kuzo zonke izigaba, futhi kufanele kuqondiswe ngokukhethekile. Ngenkathi ukulalela iklayenti kuhamba ibanga elide ekuqinisekiseni ukwaneliseka kwamakhasimende, kungaphezu kwalokho. Uma usebenzisa impendulo ngendlela efanele, bangakusiza ukuthola izikhala zokwaneliseka.
Ngalokhu, qiniseka ukuthi impendulo ifinyelela eqenjini lomkhiqizo. Futhi uma ungenza lokhu kwenzeke ngesikhathi sangempela kube ngcono kakhulu. Kubonakele lapho amakhasimende engaxhumana ngqo namaqembu womkhiqizo, noma abacwaningi, bazizwa bezethemba kakhulu.
Ungase futhi wenze leli thuba lokuba nobuntu nokwakha ubudlelwano namakhasimende. Ngenkathi amakhasimende akho ebalulekile kuwe, kufanele ubazise ngokufanayo.
Umkhuba Ohamba phambili #2: Yenza okungcono kakhulu ngeNkathi Yokuqalisa, aka Period Yegolide
Njengokuvela kokuqala ukubonakala kokugcina, isikhathi sokusebenza kwawo wonke umkhiqizo siyimayini yamathuba wegolide. Yisikhathi lapho ikhasimende likumodi yalo elangazelela kakhulu ukuzama izinto ezintsha namathuba. Ngakho-ke ukuze ukwenze kube yimpumelelo, khuthaza ukuxhumana okusebenzayo kusuka ekuqaleni.
Dizayina izinqubo-mgomo eziningana zokwenza kusebenze ikhasimende elizizwa likhuthazekile ukulandela. Ngaphandle kwalokho, zibumbe zibe yipayipi lemicimbi ebonakala njengokuwina okusheshayo kwekhasimende. Ngaphezulu, le micimbi kumele ikwazi ukulinganiselwa wena maqondana nokwaneliseka kwamakhasimende.
Kodwa-ke, futhi lesi yisikhathi lapho kufanele ukwazi ukuletha izinsiza zakho ezihamba phambili. Futhi yisikhathi esihle kakhulu sokubamba ngamakhasimende ngokuqala okuhamba kancane noma labo abangakwazi ukufinyelela kumlando wabo. Kuphakathi thola izandla zakho phezu Imikhiqizo ye-SaaS noma uxhumane nezinkampani ze-SaaS, kepha ungavumeli lesi sigaba siphume.
Masilahle i-nugget yegolide! Ukusebenza kwakho kulesi sikhathi segolide kunomthelela ngqo endleleni lonke uhambo lwamakhasimende oluzoqhubeka ngayo. Ungakhohlwa ukunikeza okusemandleni akho!
Umkhuba Ohamba phambili # 3: Gxila kuzidingo zomsebenzisi kunokuthengisa izinhloso
Lapho nje amabhizinisi eseqedile nge Ukugibela kwamakhasimende e-SaaS, baqala ngokufundisa amaklayenti abo ngazo zonke izici ezinhle. Kepha uyazikhumbula izifundo zakho zezibalo emuva esikoleni? Ungase uzibuze ukuthi i-algebra noma i-trigonometry izokusiza nini empilweni yangempela.
Kuyafana nakumakhasimende akho uma uwafaka ngazo zonke izici zomkhiqizo wakho. Ungakhathazeki! Ngenkathi ulandela le mikhuba emibili engenhla, uzothola isithombe esicacile salokho iklayenti lakho elikudingayo. Futhi akuyona imali yesikhathi? Ngakho-ke kungani uchitha isikhathi sakho neklayenti lakho ezintweni abangase bangazidingi, noma okungenani hhayi okwamanje?
Chitha isikhathi kulokho okudingwa yikhasimende lakho bese unikeza isisombululo. Ngaphandle kwalokho, kufanele uhlale unendlebe ngezinkinga zamakhasimende. Okokuqala, lalela, bese ubuza imibuzo efanele, bese udlulisa ukuthi umkhiqizo wakho ungaxazulula kanjani izinkinga zabo. Ngokufanayo, ungahle futhi ugxile ekulethweni ukuqeqeshwa okusebenzayo kumakhasimende kunokwethiyori ende futhi eyisidina.
Umkhuba Ohamba Phambili # 4: Cabanga i-B2B njenge-H2H ukuze ugcine kangcono
Iningi lamabhizinisi lisebenzise isikhathi esiningi namandla ekwenzeni amasu. Kepha-ke benza iphutha lokuzinamathisela kuwo wonke amaklayenti. Njengeziguli ezimbili zingadinga ukwelashwa okuhlukile, noma ngabe kunesifo esifanayo, okufanayo kuya ezinkingeni zamakhasimende akho.
Kufanele uqonde ukuthi i-B2B kufanele iphathwe njenge-H2H. Ithathe ngokuthi i-Human to Human noma i-Heart to Heart, njengoba ubona kufanelekile, kepha dlulisa umyalezo.
Yabelana ngezindaba zokuphumelela kwamakhasimende namaqembu akho futhi ubasize bafunde ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini okungasebenzi. Kancane kancane kufanele ubaqeqeshe ukwenza izinqumo zesikhashana ukuze bakwazi ukuletha izixazululo ezenziwe ngqo. Kuyasiza ukwakha ifayili le- Isu lokumaketha le-SaaS kangcono futhi ngempumelelo.
Lapho ubheka kakhulu ifayela lakho le- amaklayenti ibhizinisi njengabantu hhayi izinkampani, kulapho uzothuthukisa ukugcinwa kwazo. Abaphathi bempumelelo yamakhasimende abasebenzisa le nqubomgomo benza ukugcinwa kwamakhasimende kube bushelelezi kakhulu.
Umkhuba Ohamba Phambili # 5: Shintsha Izinqubo Zempumelelo Zamakhasimende ze-SaaS zokuwina okusheshayo
Abaphathi bempumelelo yamakhasimende banemithwalo yemithwalo yemfanelo eminingi, kusukela ekwakhiweni kwezinqubo kuya ekulandeleni iklayenti ngalinye. Yize behlola amakhono abo amaningi, imisebenzi ingahle iphenduke umthwalo ngokushesha. Lokhu kuzothinta kancane kancane isilinganiso sempumelelo yekhasimende lakho.
Ngakho-ke, sebenzisa isoftware yokuphathwa kwemisebenzi yokwenza izinqubo zakho zishintshe ngokushesha endaweni yokuphumelela kwamakhasimende. Ukuzenzakalela kuzokunikeza indawo yokwenza lula izinqubo zakho futhi ugxile kwezinye izinto ezinjengokumaketha nokwandiswa.
Ngaphandle kwalokho, kuzokusiza ukuthi unciphise ukusilela emuva futhi ubambe isikhathi sakho sokuxazulula. Ngokugeleza kokufinyelela okulula kepha okwanelisayo, uzokwazi ukufinyelela kuwo wonke amaklayenti, ngesikhathi. Ngaphezu kwalokho, uzothola isikhathi sokuhlaziya nokwenza ngcono izinqubo zamathemba okungcono okukhula.
Imiphumela izoba efanele!
Ngakho-ke le yindlela ukumaketha okuphumelela ngayo kwe-SaaS okungazuzisa ngayo izinhloso zebhizinisi lakho zesikhathi eside. Kungumkhiqizo onomthelela ongaletha konke ukuphathwa kwamakhasimende akho namathuluzi wokumaketha endaweni eyodwa. Kuyipulatifomu enembile futhi enesabekayo ezokusiza ekwandiseni ukugcinwa kwamakhasimende ekusakazeni lelo gama lomlomo elimnandi, sonke siyafisa.
Tags: ukusebenzab2bikhasimende onboardingimpumelelo yamakhasimendelokubonisasaasisoftware njengensizakaloimpumelelo igebe
UHardik Oza ungudokotela we-SEO onolwazi olungaphezu kweminyaka engu-9. Usiza izinkampani ukukhulisa amabhizinisi abo. Wabelana ngemicabango yakhe ngokushicilelwa okungeziwe njenge-SEMrush, Search Engine People, ne-Social Media Namuhla. Mlandele ku-Twitter @Ozaemotion.
Ukuhlanganiswa kwe-DMP: Ibhizinisi eliqhutshwa ngedatha labashicileli